Keeniyaatti Lakkoofsi Namoota Vaayresii Kooronaan Qabamanii Shantama Gahe
Bitootessa 30, 2020
Ministeerri Fayyaa Mootummaa Keeniyaa biyyattii keessatti harra lakkoofsi namoota Vaayresii Kooronaan hubamanii shantama gahuu mirkaneessee jira
Mutaahii Kaagwee Ministirri Kaabinee Waajjira Ministeera Fayyaa Keeniyaa namoota Vaayresiin kun hubuunii hin hafne jedhamanii hordoffii fi qorannoon taasifamaafii ture keessaa haga yoonaa 50 irratti Kooronaan argamuu raggaasisaanii jiran.
“Sa’a 24 darban kana qorannoo namoota shakkaman irraatti taasifamaa tureen namootni 8 ka Vaayresii kanaan qabamuun isaanii beekame argamanii jiran. Akka biyyaattis amma lakkoofsi namoota Vaayresii kanaan qabamuun isaanii haga yoonaa mirkanaayee jiru 50 jechuudha. Warra namoota 50’mman kana waliin qunnamtii qaamaa qabu jedhamanis adda baasuuf barbaadaa jirra.” Mutaahii Kaagwee; Kaabinee Waajjira Ministeera Fayyaa Keeniyaa
Miister Kaagween warra harra dhukkubi kun irratti argame keessa alaa dhukkuba kanaan faalamanii ka dhufan isaan irraas qaamaan walitti siquun ka faalaman jiraachuu himanii jiran. Keesuumaa warri asitti vaayresii kanaan faalame, of eeggannoo malu gochuu dhabiinsaan ta’uu irra deebiin dubbatanii jiran.
Waajjirri Ministeera Fayyaa Mootummaa keeniyaa akka beeksisetti ammas namoota Vaayresii kanaan faalamuu hin hafne ka jedhaman 1471 irratti hordoffiin ogeessota fayyaan bakka mootummaan adda bahetti gaggeeffamaa jira. Yoo ibsa Kennan harra Mr. Kaagween keessumaa warri doqdoqqeen tajaajila geejjibaa biyyattii keessatti kennaa jiru; dhukkuba kana tamsaasuuf karaa salphaarra jira jedhan. Kanaafis warri kun of eeggannoo jabaa akka taasisu Poolisiin biyyattiis warra kana akka hordofu gaafatanii jiran.
Angawi kun lammilee Keeniyaa ajaja mootummaan biyyattii tatamsayina Vaayresii kanaa ittisuuf baase hojiirra akka oolchan; keessumaa labsii halkan sa’aatii 1:30 haga barii sa’aatii 11tti socho’uun dhorkaadha jedhame akka kabajan gaafatanii jiran.
Labsiin halkan manaa bahuu dhorku Keeniyaatti torbee darbe ka labsame yoo tahu; Jimaata darbe kanaa kaasee hojiirra jira.